Ngaba ukhangela indawo enoxolo yaseMazantsi eLouisiana? Ungajongi phambili, iBayou Breeze Bungalow yeyona ndawo ifanelekileyo yeholide ukuze ufumane indalo entle ye-LA! Ikhabhinethi ikwiSiqithi iThree Rivers, imiswe phakathi kweDiversion Canal kunye nePetite Amite River. ZISA ISIQEPHU SAKHO KUNYE NEJET SKIS! Olu luluntu lwenqwelo yegalufa kunye nenqwelo yegalufa yezihlalo ezi-4 ibandakanyiwe kunye nerenti. Ke lungiselela uhambo lwakho lomgxobhozo njengoko ugqitha iibhulorho eziya esiqithini ukuze uphumle kwaye uphumle!
I-Bayou Breeze Bungalow yikhabhathi eyi-600 sq ft, enefenitshala epheleleyo ngegumbi lokuhlala, ikhitshi eligcweleyo, amagumbi okulala ama-2, iindawo eziphakamileyo ezi-2 kunye negumbi lokuhlambela eli-1. Igumbi lokulala elikhulu lilala i-2 kwibhedi elingana nokumkanikazi, igumbi lokulala leendwendwe linebhedi egcwele ibhedi enebhedi egcweleyo emazantsi kunye namawele ngaphezulu, kwaye indawo nganye ephezulu inebhedi egcweleyo. Ikhabhinethi inesikhenkcezisi esipheleleyo, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu, i-oveni, imicrowave, itoaster, imbiza yekofu, kunye negrill yegesi (kwidekhi esezantsi) enetanki yepropane ebandakanyiweyo. Iilinen, iitawuli, iimbiza, iipani, izitya, izinto zesilivere, iitawuli zephepha, iphepha langasese, isepha yezitya, neengxowa zenkunkuma. Ezinye izinto zokucoca ngokubanzi zibonelelwa kunye ne-swiffer sweeper, ijethi emanzi, kunye ne-vacuum. Akukho nto iwashayo/yokomisa kodwa kukho indawo yokuhlamba impahla ngaphandle kwe-Hwy 22. Akukho zikhabhathi, nangona kunjalo kukho i-nightstand yedrowa ye-2 kwinkosi kwaye igumbi ngalinye linamagwegwe emva kweengcango zokuxhoma iimpahla. Sikwabonelela ngezinto zesidlo sakusasa, ukutya okulula, ikofu yoLuntu, kunye nebhotile yewayini ukuze iindwendwe zethu zizonwabele. Sela ikofu yakho yasekuseni ukusuka kwibalcony ephezulu, phumla kumgangatho osezantsi kwizitulo ezishukumayo, okanye ucwilise kwi-tub eshushu ngesiselo sakho njengoko ubukele izikhephe zidlula. Ipropathi yethu ineendawo zokuhombisa zangasese zangasese kunye neziliphu ezimbini zesikhephe.
Ungayonwabela indalo, ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukotla, kunye nokutya ukutya okuseMazantsi eLouisiana. Thatha ukhwele isikhephe okanye uhambe ujikeleze isiqithi ukuze ubone imigxobhozo emihle enemithi yemisipres emikhulu enxibe ubulembu obujingayo. Ngemini elungileyo unokubona iifudo, iingwenya, i-nutria kunye nekhephu egrets. Iqula loluntu kunye ne-gazebo iyafumaneka kubaqeshi. SineDOCK ELITSHA ELITSHA elineziliphu ezi-2 zesikhephe kunye nendawo yokutyibiliza kwijethi. ICanal Bank ibonelela ngokusungulwa kwephenyane malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwinkampu kwiDiversion Canal. Ukuba ungathanda ukurenta isikhephe, ndwendwela iwebhusayithi ye-geauxoutdoors.
INKCAZELO: Ukuba ngesizathu esithile kukho ukusilela kwesixhobo, siya kwenza zonke iinzame zokusilungisa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, asiyi kunyanzeleka ukuba sibuyisele nayiphi na imbuyiselo yokungasebenzi kakuhle kwisixhobo (i-tub eshushu, iiTV, istiriyo, isidlali seDVD, inkonzo ye-intanethi, njl.njl.)
Kukho iibhari ezininzi kunye neeresityu ezikufutshane ezinokufikelelwa ngenqwelo yegalufa kunye nesikhephe, iLagniappe's, iTiger Hut Bar kunye neRum Buoy's. Ukutya kwaselwandle kukaKevin, iCanal Bank, iBoondock's kunye neHilltop yokutyela inokufikelelwa ngemoto nangephenyane. Brian's Supermarket, Chris's pharmacy, King's Way gas station, Sarita's Bar & Grill, New Orleans Daquiri, Dollar General, kunye neSubway zonke zinokufikelelwa ngemoto kwi-Hwy 22. Iimenyu ziyafumaneka kwi-cabin.
Ikhabhinethi ilungele iLSU ukuba uza kumdlalo kodwa ungafuni ukuba sedolophini. Ime malunga nesiqingatha phakathi kweBaton Rouge kunye neNew Orleans. Ukuba uthanda ukuthenga, iTanger Outlet Mall iseGonzales malunga nemizuzu engama-25 kude kwaye kanye ngaphaya kweCabela's eya kuqinisekisa ukuba igcina amadoda exakekile. Ithiyetha bhanyabhanya yaseMalco Cinema kunye nePremier Lanes Bowling alley zikwiAirline Hwy nakwiGonzales. Ukuthenga izinto zakudala kunye nesikhumbuzo, iCajun Village ikwiSorrento malunga nemizuzu engama-20 ukusuka kwigumbi lokuhlala. Le Marikethi yeNtakumba yaNgaphakathi nayo imalunga nemizuzu engama-20 eGonzales.
Asithinteli ukufikelela kwiindawo eziphezulu, kodwa asinaxanduva lwako nakuphi na ukwenzakala okunokuthi kwenzeke ngokungena kwiindawo eziphezulu. Abantwana kufuneka babekwe iliso kwindlela yokuhamba kunye ne-pier ngamaxesha onke. Asinaxanduva ukuba nabani na awe okanye arhaxwe emanzini. Abaqeshi kufuneka balandele yonke imithetho yenqwelo yegalufa. Akukho mntu uneminyaka engaphantsi kwe-16 uvumelekile ukuba aqhube inqwelo yegalufa. Emva kokuba ubhukishe ugcino lwakho, uya kufumana imiyalelo nge-imeyile malunga nezalathiso, indawo yokumisa, indlela yokufikelela kwinqwelo yethu yegalufa, kunye nendawo yendlwana. Sikwabonelela ngeenombolo zethu zeselfowuni ukuba kukho nantoni na oyifunayo.
Asithinteli ukufikelela kwiindawo eziphezulu, kodwa asinaxanduva lwako nakuphi na ukwenzakala okunokuthi kwenzeke ngokungena kwiindawo eziphezulu. Abantwana kufuneka babekwe iliso…